China 125A 160A 250A 3 Pole AC MCCB Case olwenziweyo Circuit Breaker mveliso kunye nabathengisi | UBUNGOZI
Igama lomzekelo: TOS1
Inombolo yePole: 3P
Ikaliwe iVenkile yokuSebenza: 400V AC
Uhlobo lwejika: A
Uncedo lwe I-AC MCCB Inqaku: 125A 160A 250A
Ityala lesekethe elibunjiweyo, elifinyeziweyo i-MCCB, luhlobo lwesixhobo sokhuselo sombane esingasetyenziselwa uluhlu olubanzi lweevolthi, kunye nokuhamba rhoqo kwe-50 Hz kunye ne-60 Hz. Umahluko ophambili phakathi kwetyala elibunjiweyo kunye nesekethe encinci yesekethe kukuba i-MCCB inokuba namanqanaba okwangoku ukuya kuthi ga kwi-2,500 amperes, kwaye useto lwayo lokuhamba luhlala luhlengahlengiswa. Umahluko owongezelelweyo kukuba ii-MCCB zihlala zinkulu kakhulu kune-MCB. Njengazo zonke iintlobo zesekethe, i-MCCB inemisebenzi emithathu ephambili:
Ukukhuselwa ekufumaneni umthwalo - imisinga ngaphezulu kwexabiso elilinganisiweyo elihlala ixesha elide kunesiqhelo kwisicelo.
Ukukhuselwa kwiziphene zombane-Ngexesha lesiphoso esifana nesekethe emfutshane okanye ulayini, kukho imisinga ephezulu kakhulu ekufuneka iphazanyiswe kwangoko.
Ukutshintsha nokucima isekethe- Lo ngumsebenzi ongaqhelekanga kwabaphuli besekethe, kodwa banokusetyenziselwa loo nto ukuba akukho tshintsho lwaneleyo lwencwadi.
Uluhlu olubanzi lweereyithingi ezikhoyo ezifumanekayo kwityala elityunjiweyo-leesekethe ezivumela ukuba zisetyenziswe kwizicelo ezahlukeneyo. Ii-MCCBs ziyafumaneka kunye nenqanaba langoku elisusela kumaxabiso asezantsi anje ngee-15 amperes, ukuya kumlinganiso weefektri onje nge2,500 amperes. Oku kuvumela ukuba zisetyenziswe kwizicelo zamandla asezantsi kunye namandla aphezulu.
Ukucaciswa kobuchwephesha be-AC MCCB 3P Breaker Circuit
Lobukhulu yangoku High Ityala leSekethe eliBunjiweyo
Egqithileyo Ukukhuselwa kweMihla ngemihla ukuKhanya okungafunekiyo kwe-UV yokukhanya okungafunekiyo
Okulandelayo: Umgangatho olungileyo we-PV Cable Harness-4to1 MC4 Y Yesinxibelelanisi seSolar iPhaneli yoDibaniso oluDibeneyo- RISIN
umqhubi wesekethe ophezulu ngoku